दुर्घटना हुनुअघि परमिताको रंगीन रात, जसले एक आम मानिसको ज्यान गयो ! - Mitho Khabar
January 26, 2020 mithokhabarLeaveaComment on दुर्घटना हुनुअघि परमिताको रंगीन रात, जसले एक आम मानिसको ज्यान गयो !
काठमाडौं – बुढानिलकण्ठमा २८ मंसिरमा भएको एउटा दुर्घटनामा लिला देवकोटाको मृत्यु भएपछि नेपाली अभिनेत्री र केही धनाढ्यको रंगीत रातको रहस्य प्रहरीमा दिइएको बयानमा खुलेको छ ।
अभिनेत्री परमिता राणा, अमेरिका बस्दै आएका पृथ्वी मल्ल, करिश मास्के र मनिषाको त्यो रातको कथा प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा दिइएको बयानमा खुलेको छ ।
रातभरी नशामा चुर भएका यी चार जनाले एउटा रिसोर्टमा खाना मगाए, पर्खिँदा चुम्माचाटीको विषयमा गार्डले बयान दिएका छन् । दुर्घटना नभएको भए अभिनेत्रीसहित पैसावालको रंगिन रातको विषयमा प्रहरीले खुलाउने थिएन ।
ग्रिनल्याड रिसोर्टका सुरक्षा गार्ड सुरज चौधरीसँग समेत प्रहरीले घटनाबारे सोधपुछ गरेको थियो । पृथ्वीसँग आएका अर्का युवक करिश मास्के, नायिका परमिता र मनिषा रक्सीले झ्याप भएर रिसोर्ट पुगेको बयान सुरक्षागार्ड चौधरीले दिएका छन् ।
‘म ग्रिनल्यान्ड रिसोर्टमा काम गर्दै आएको छु । सो क्रममा गत मंसिर २८ गते मेरो मेन इन्ट्री पोइन्टमा ड्युटी थियो । सोही बेला बिहान ८: २६ बजे पृथ्वी मल्ल आफैंले बा१४च ६१२३ नम्बरको कार चलाएर २ केटी र एक केटा लिएर आएका थिए । त्यसबेला उनीहरूले अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेको जस्तो देखिन्थ्यो ।
रिसोर्टमा खाजा अर्डर गरे । त्यन्तिजेन्ल रिसोर्टमा बस्दा पृथ्वी मल्ल र उनीसँगै आएकी एक जना केटी अंगालो मार्ने, किस गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न थाले ।
म्यानेजरले यस्तो हर्कत नगर्नुस्खा नाको पैसा तिर्न लगाएर रिसोर्टबाट बाहिर जान लगाए । बिहान ९ः४० मा उनीहरू रिसोर्टबाट बाहिरिएका थिए ।’ गार्डको यो बयानले के खुलाउँछ भने विदेशमा रहेका धनाड्य परिवारका सन्तानसँग नेपालका हिरोइनको प्रेम सम्बन्ध मात्र होइन, रमाइलो रात पनि बित्ने गरेको छ ।
दुर्भाग्यबस भएको दुर्घटनाले यो रहस्यको खुलासा गरेको छ । तर रमाइलो गर्ने जोडीको गल्तीले एक आम मानिसको ज्यान पनि गएको छ ।(जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार)